News Republic App | Avy amin'ny mac aho
Ankafizo aho fa avy amin'ny Mac ao amin'ny rindrambaiko News Republic
Avy any Mac aho izao dia azo alaina ao amin'ny app News Republic ho an'ny fitaovana iOS. Eny, amin'izao fotoana izao dia misy fomba maro hanarahana ireo bilaogy na pejin-tranonkala rehetra mahaliana antsika ireo ary tianay ny mizaha amin'ny fotoana rehetra, izany no antony ho tsara ity app ity raha manana iPhone, iPad na iPod isika ary koa ho an'ny fitaovana Android. Raha te hampahafantarina antsika amin'ny fotoana rehetra ny vaovao farany navoaka tao amin'ny Soy de Mac na media hafa izay mahaliana antsika, ity fampiharana ity dia mety ho mora ampiasaina.
Ny rindrambaiko dia manana interface madio sy madio, zavatra ahafahantsika manana ny vaovao rehetra navoaka tao aminy. Raha miresaka momba ny fampiasana isika dia afaka mandroso izany dia tsotra be ny fampiasana azy, satria manolotra antsika ny safidinao rehetra mazava tsara hatramin'ny voalohany sy amin'ny fomba tena madio. Izy io dia manana motera fikarohana izay ahafahanao manampy anay amin'ny lisitry ny famakiana, noho izany dia ilaina ihany ny manoratra hoe avy any Mac aho ary ampandehano ny fampandrenesana avy amin'ny menio ambony. Ankehitriny isaky ny misy vaovao vaovao mivoaka ao amin'ny bilaogy dia hahazo fampandrenesana ho azy eo amin'ny ideoloanao ianao.
Misy zavatra mahaliana amin'ity rindranasa ity dia mamela antsika hivezivezy eo amin'ireo pejin-tranonkala rehetra izay notehirizinay tamin'ny fomba haingana sy mahomby, manamora ny pejin-tranonkala ankafizinay rehetra ho lasa pejy iray. Izahay koa dia manana maody amin'ny alina misy ka tsy mandreraka ny masonay amin'ny tarehin-jiro ambany ary mamela anao hanova mora ny endritsoratra sy ny haben'ny lahatsoratra. Maimaimpoana tanteraka ny News Republic avy amin'ny App store ary ny Google PlayIzy io koa dia manana ny fampiharana azy manokana ho an'ny Apple Watch.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » Ankafizo aho fa avy amin'ny Mac ao amin'ny rindrambaiko News Republic
Toy izao no nanovan'ny Apple ny pikantsary an'ireo fampiharana ho an'ny Apple Watch
Izay nolazain'i Taylor Swift momba ny Apple Music hampihemorana an'i Apple